कथा : सौतेनी आमा - Ratopati
जीवनभर सँगै बाच्ने सँगै मर्ने कसम खाएर मन्दिरमा गई विवहा गर्ने सिन्दूर हाल्ने निर्णय गरे अर्चना खड्का र प्रेम नेपाली स्कुलदेखिका साथी हुन् । धर्म कर्ममा अति नै महत्व राख्ने अर्चनाको परिवार छोरी भागेर पल्ला गाउँको प्रेम नेपालीसँग गई भन्ने खबरले तिन फन्का घुमेर ढलेका थिए ।
उसले पटक पटक माइतीको खबर, मिल्ने साथीसँग सोध्ने गर्थी । हरेक कुराको जानकारी पाउँथी । उसका बारेमा घर परिवार पछि लागेका छन् भनेर भन्दा अर्चना मुर्छा पर्थी । आखिर उसले प्रेम गरेकी थिई खै किन हो कुन्नी समाजले उसको प्रेमलाई तृरष्कार गर्दै थियो । प्रेमको मापदण्ड खोज्दै थियो । ऊ सोच्थी प्रेम निःस्वार्थ चीज हो, जसको कुनै मापदण्ड हुन्न । मनमनै गुनगुनाउँथी, आफूलाई समाल्न खोज्थी तर समाल्न सक्ने तागत थिएन । भित्रभित्र मन डढेल्लोले सखाप पारिसकेको थियो । आमाको पिर, शोकले तनमन चिरचिर धुजाधुजा परेका थियो । ऊ आफैलाई प्रश्न गर्थी परिवारले चासो नदिएको कुरामा उक्साउन यो समाजलाई के सकसक भएको होला ? किन स्वतन्त्रता हुन दिँदैनन ? किन निषेध गर्छन् ? गहिराइसम्म पुग्न खोज्थी तर उत्तरविहिन हुन्थी । उसका प्रश्न खेर जान्थे ।
कविता : कोही मान्छे